I-Anchor: Isimahla, ilula, iPodcasting yohlobo oluSelfowuni | Martech Zone
Lwesine, Matshi 29, 2018 NgoLwesihlanu, Matshi 30, 2018 Douglas Karr
kunye Anchor, unokumilisela ngokupheleleyo, uhlele, kwaye ulawule i-podcast yakho ngqo kwifowuni yakho okanye kwidesktop. I-Anchor isimahla ukuba ingasetyenziswa ngaphandle kwemida yokugcina. Abasebenzisi banokubamba zonke iaudiyo zabo nge-Anchor mobile app okanye bayilayishe kwideshibhodi yakho kwi-intanethi.
Hlanganisa amacandelo amaninzi njengoko ufuna kwisiqendu (umzekelo, ingoma yakho yomxholo, isingeniso, udliwanondlebe kunye nendwendwe, kunye neminye imiyalezo yabaphulaphuli), ngaphandle kokwenza uhlengahlengiso oluphambili.
Iimpawu zeAnchor zibandakanya:
Udliwanondlebe Anchor - yenza ukuba ukwazi ukwenza umnxeba ngaphandle.
Ukuhanjiswa isasaza ngokuzenzekelayo ipodcast yakho kumaqonga amakhulu epodcast (kubandakanya iApple Podcasts kunye neGoogle Play Music) ngonqakrazo olunye.
Umdlali olungisiweyo -Ukuba sele unayo ibhlog yakho okanye iwebhusayithi, unokufaka ngokulula ipodcast yakho apho ukuze abantu baphulaphule ngaphandle kokushiya indawo yakho. Thatha ikhowudi yokushumeka kwiprofayili yakho kwi-Anchor mobile app okanye kwideshibhodi yakho kwiankile.fm.
Ukuqhwaba izandla - Nabani na omamele ipodcast yakho kwi-Anchor angaqhwabel 'izandla amaxesha abawathandayo. Ukuqhwaba kuyaqhubeka, ke nabani na omameleyo kamva uya kuba nakho (ngokuzithandela) ukuva amalungu awonwabileyo.
Amagqabantshintshi Abaphulaphuli bangathumela imiyalezo yelizwi kwimiboniso yakho ngalo naliphi na ixesha. Baya kuba nomzuzu wokuphendula, ogcina yonke imiyalezo yakho imfutshane kwaye imnandi.
Ukukhutshelwa ngokuzenzekelayo - I-Anchor ikhuphela umsindo olayishwe kwi-Anchor (phantsi kwemizuzu emi-3).
IiVidiyo zeNtlalo- xa ufuna ukukhuthaza i-podcast yakho kwimidiya yoluntu, i-Anchor ivelisa oopopayi, ividiyo ebhaliweyo kwifomathi elungileyo yeqonga ngalinye. Baxhasa isikwere se-Instagram, ubume be-Twitter kunye ne-Facebook, kunye nomzobo wamabali.
Ukuhlaziywa kwePodcast Nge-Anchor, ungabona izinto ezifana nokudlala kwakho ngokuhamba kwexesha, ukuba iziqendu zinamathelana njani, kwaye zeziphi iinkqubo abantu abazisebenzisayo ukumamela. Ukuba abaphulaphuli bakho basebenzisa i-Anchor app, unokubona nokuba ngubani owavayo isiqendu ngasinye, nalapho baqhwaba izandla okanye bagqabaza khona.
Qalisa iPodcast yakho
tags: anchoriankile 3.0Iimpawu zeankileiankile.fmPodcastingusetyenziso lwepodcasting